Kiran KC Biography | Hamro Kalakar
Biography last updated: 16th Sep, 2017
Facts of Kiran KC
Malai nasodha kaha dukchha ghau
Contact Kiran KC
Suggestion for Kiran KC
Kiran KC is Actor, Comedian. He was born on 28th June in Lalitpur. His horoscope is Cancer. His marital status is Married. His height is5feet 10 inches. His favorite color is Green, favorite movie is Chakka Panja, favorite music is Malai nasodha kaha dukchha ghau, favorite food is Nepali Food, favorite place is Ghandruk. He has recently been involved in movie Shatru Gate.
हाँस्य कलाकार किरण केसी ४० वर्षदेखि नेपाली कला उद्योगमा सक्रिय छन् । किरण ललितपुर इमाडोलका रैथाने हुन् । किरणलाई पढाएर ठूलो मान्छे बनाउने परिवारको सपना थियो । तर, उनलाई कहिल्यै पढ्न मन लागेन । पढ्न थालेपछि एकाएक उनको टाउको दुख्न थाल्थ्यो । किताब समाउँदासमाउँदै उनका आँखा बटारिन थाल्थे । उनका लागि किताब ‘स्लिपङ ट्याब्लेट’ थिए । पढेनन् त्यतिबेला, पछुतो अहिले छ ।
उनलाई कलाप्रति मोह थियो । कतै गीत बजेको सुन्नै हुँदैनथ्यो– कुदेर त्यहीँ पुग्थे । नाच्थे, गीत गाउँथे । मादल, सारंगी, बाँसुरी र खैंजडीको तालसँगै उनी कम्मर मर्काउँथे । दसैं, तिहार होस् या विवाह, व्रतवन्ध– गाउँका कुनै कार्यक्रम छुट्दैनथे । सत्यनारायणको पूजामा समेत उनी नाचगान गर्न पुग्थे । गाउँमा उनको यस्तै छवि बनेको थियो ।
सडक नाटक भनेपछि हुरुक्कै हुन्थे । सडक नाटक गर्दै कयौं दिन हराउँथे । त्यो समय परिवारले कलालाई पेसाको रूपमा लिइँदैनथ्यो, त्यसैले अनुमति दिँदैनथ्यो । तर, पनि उनी रिहर्सलका लागि घरबाट चिउरा, सखर, चिनी चोरेर लैजान्थे । आफैं मकै, भटमास भुट्थे र साथीहरुसँग बसेर खान्थे । बच्चा हुँदा उनले गरेको यही मेहनतले कालान्तरमा चलचित्र र टेलिसिरियल खारिन सघायो ।
किरणको अभिनय यात्रा मह जोडीको टेलिचलचित्र ‘१५ गते’ बाट सुरु भयो । त्यसमा उनले कल्लु चौधरी भएर अभिनय गरे । उनलाई हाँस्य कलाकारका रूपमा स्थापित हुन लामो समय कुर्नै परेन । उनलाई कल्लुले ‘हिट’ बनायो । मह जोडीको सहयोग र उनको मेहनतको सुन्दर संयोजनले होला– उनको अभिनय यात्राले कहिल्यै ‘ब्याक गियर’ लगाएन । त्यसैले त उनी कहिल्यै पनि मह जोडीको प्रशंसा गर्न चुक्दैनन् ।
०४२ सालदेखि मह जोडीसँग सहकार्य गरेका केसीले करिब ३० वर्ष उनीहरुकै छत्रछायामा काम गरे– जसले उनलाई कलाको बाटो देखायो, स्थापित गरायो, नाम र दाम दुबै दिलायो । त्यसैले उनी मह जोडीसँग सधैं नतमस्तक हुन्छन् ।
पञ्चायत कालबाट सुरु भएको उनको कला यात्रा जारी छ । उनले ५५० भाग टेलिसिरियलमा आफूलाई उतारिसकेका छन् । १५ दिनअघि मात्रै आधा महिना लन्डन घुमेर फर्किएका किरणले अहिलेसम्म साढे ५ हजार स्टेज सो गरिसकेका छन् ।
औपचारिक रूपमा उच्च शिक्षा नलिए पनि किरण फाट्टफुट्ट अंग्रेजी बोल्छन् । नेपालीमा धाराप्रवाह बोल्न उनलाई शायदै कसैले उछिन्लान् । बाल्यकालका उट्पट्याङदेखि आजसम्मका साना–ठूला सबै घटना उनको जिब्रोमै छन् । कहाँ, कहिले के गरें, उनी सबै फेहरिस्त प्रस्तुत गर्न सक्छन् । मेलो बसाइदिनुपर्छ, उनी आफैं सुरुदेखि अन्तिमसम्म मात्र पुग्दैनन्, भावी योजनासम्म सुनाउन भ्याउँछन् । शम्भु प्रधानको ‘सम्पत्ति’बाट सिनेयात्रा सुरु गरेका किरणले १०५ वटा चलचित्रमा अभिनय गरेका छन् ।
किरणले उमेरमै चलचित्र र टेलिचचित्रमा अभिनय गरे । किरा (किरण केसी र राजाराम पौडेल) जोडी हिट भयो । मह जोडीपछि नेपालकै हिट कलाकारको जोडी ‘किरा’ बन्यो । कैयौं टेलिचलचित्र र चलचित्रमा यो जोडीले अभिनय गर्यो । पछि राजाराम अमेरिका गए । किरण एक्लै भए । ‘किरा’को एउटा खुट्टो भाँचियो ।
केही समय एक्लो भएका किरणको नयाँ जोडीका रूपमा शिवहरि पौडेल आइपुगे । उनीहरुको जोडी पनि खुब जम्यो । दर्शकले मन पराए ।
उमेर ढल्किँदै गयो । चलचित्र पातलिँदै गए । राजाराम थिएनन् । किरणको उपस्थिति कम देखियो ।
जितु नेपालले ‘जिरे खुसार्नी’ निर्माण गरे । शिवहरि पौडेलले किरणलाई बोलाए । १७ औं भागबाट ‘जिरे खुर्सानी’मा इन्ट्री मारे । ‘राता मकै’ थेगो लिएर दर्शकसामु आएका किरण डेढ दशकपछि दोस्रो पटक हिट भए । दर्शकले उनको थेगो र अभिनय दुबै मन पराए ।
‘जिरे खुर्सानी’ले उनलाई देश–विदेश पुर्यायो । उनी ४० राष्ट्र घुमे । नेपालका ६५ जिल्ला पुगे । लन्डन २ पटक पुगेका किरणले अमेरिकामा ५ पटक प्रस्तुति दिए । उनी जापान ३ पटक, मलेसिया र कतार ५र५ पटक पुगे । हङकङ र बैंकक त पानीपँधेरो जस्तै भयो ।
प्राविधिक कारण भन्दै ‘जिरे खुसार्नी’ बन्द भएपछि अहिले उनी सोमबार ८ः४५ मा प्रसारण हुँदै आएको ‘ब्रेक फेल’ मा शिवहरिसँगै निर्देशन गरिरहेका छन् । नेवारी भूमिकामा देखिएका किरणले यसमा भने नयाँ थेगो प्रयोग गरिरहेका छन्– ‘चिकेन चिल्ली’ ।
किरण ‘एक्सन–कट’मा मात्र सीमित छैनन् । संगीतका सुरसँग पनि उत्तिकै परिचित छन् । उनी गीत पनि गाउँछन् । तीन वटा सोलो एल्बम निकालिसकेका छन्– ‘धरोधर्म माइली’, ‘सन्चै हुनुहुन्छ ?’ र ‘राता मकै’ । ‘राता मकै’लाई चितवनको कालिका एफएमले शताब्दीकै लोकप्रिय थेगो घोषणामात्र गरेन, उनलाई सम्मान पनि गर्यो । उनकै थेगोमा कैयौं गाडीले आफ्नो नामाकरण गरे । सरकारले उनको घर रहेको मार्गलाई ‘राता मकै’ मार्ग नामाकरण गरिदियो । चालक तथा सहचालकले उनको घरनजिकैको चोकलाई ‘रातामकै चोक’ नाम राखे । पान पसल खोलिए । फिल्मका गीत बने । उनलाई यसमा खुसी लाग्छ ।
Kiran KC Movies
Kiran KC Photo Gallery
Kiran KC Videos
Palla Ghare Suntali - Santosh KC, Devi Gharti & Shanta Pariyar Ft. Kiran
Aama Timle Pathayeko by Kiran K.C.
Jeevan Saathi with Kiran KC and Sita KC
‘रुपै मोहनी’ करोड क्लबमा
महसञ्चारले बनाउने भयो – सत्रुगते